Te-hiverina eo amin'ny fahefana ny mpivarotra amoron-dalana
2016-08-24 @ 20:55 in Politika
Tsy te-hiresaka ady politika loatra aho na dia mankafy io taranja iray io aza. Mampizarazara izy io ary mampiady ny olona mpifanerasera sy tokony hifandray isan'andro noho ny asa aman-draharaha. Fa misy kosa ny tanjona izay tsy tiako mihitsy ny kendreny satria dia fanakorontanana ankitsirano ny fampandrosoana ny tanàna.
Misy fahitalavitra malaza amin'ny fanoherana ankehitriny ary manambava tokoa. Sady tsy tiany ny filoham-pirenena no tsy tiany ihany koa ny Ben'ny Tanànan'Antananarivo. Mampiditra tsikelikely ny fanakorontanana sy ny fandranitana io fahitalavitra iray eto Antananarivo io. Gaga ny tena raha nanaraka tsy fidiny ny vaovao an-tsariny tamin'ny 19 aogositra 2016 lasa teo mahita ny famoahany ny heviny amin'ny alalan'ny feon'ny mpivarotra amoron-dalana. Te-ho mpitondratenin'ireo mpivarotra amorony sy anaty lalana ireo angamba izy no tena marina.
Fa inona no nataony tamin'ny 19 aogositra 2016? Raha tsy maharaka ianao dia tamin'io fotoana io no niantsoan'ny antoko iray te-hiseho masoandro antsoina hoe Antoko Fanavotam-Pirenena na AFP ny olona hidina eny Analakely hanala ny Filoha fa "izay ihany no vahaolana tokana amin'izao toe-java-misy izao". Raikitra ny fifanasana vangy talohan'io daty io. Tsilian-tsofina no nandrenesana fa 3000 any ho any ny mpitandro ny filaminana nahetsika teo Analakely hanosehana izay mpanao fihetsiketsehana hoavy eo. Tankina teo ny amin'iny resaka iny. Fa ny tohim-baovao no nahaliana:
Naka ny feon'ireo mpivarotra amorondalana na anaty lalana ity fahitalavitra, inona ny hevitra nivoaka? Firaisana tsikombakomba eo amin'ny fitondrana Rajaonarimampianina sy ny Ben'ny Tanàna Lalao Ravalomanana izao fanakatsakanana ny asan-dry zareo tsy hivarotra eny amoron-dalana izao. Saribakoly fotsiny io Lalao Ravalomanana io fa lohan'i "Dada" ihany no tena mitondra. Ny nampihomehy irery ahy moa dia ilay resaka tsy misy ifandraisany dia raikitra ny famelezana ilay Ben'ny Tanàna. Inona no idiran'ny Ben'ny Tanàna amin'ny fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana sakanan'ny mpitandro ny filaminana?
Andro vitsivitsy taty aoriana, omaly talata, niditra fiara fitateram-bahoaka, dia nandre resaka tamin'ny radio iray tarika sy anarana amin'ilay fahitalavitra nitatitra ny resaka teo ambony ihany. Fandraisana vahiny sy fanehoan-kevitry ny mpihaino no fizotrany fa dia kapoka iray tamin'ilay resaka mpivarotra amoron-dalana ihany. Ny mahavariana dia mody feon'ny mpihaino na olona anontaniana hatrany ilay izy fa dia mitovy ny hafatra, tsy rariny mihitsy ny sakatsakana ataon'ny Ben'ny tanàna amin'ny mpivarotra amoron-dalana: "Fa maninona no eo Analakely sy Ambodifilao sy Soarano irery ihany no enjehin'ny Ben'ny Tanàna nefa feno eran'Antananarivo?", "Raha tsy zakan'ny Ben'ny Tanàna ny isian'ny Mpivarotra Amoron-dalana dia mialà fa aza ny vahoaka madinika no atositosika!"
Tsy mahagaga ianareo raha nandre na nahita amin'ny vaovao androany alarobia itakian'ny mpivarotra amoron-dalana tarihan'ingahy antsoina hoe Filohan'ny Mpiaro ny Mpanjifa ny fialan'ny Ben'ny Tanàna. Indray fotsiny no niserana ny masoko ilay fahitalavitra, ary indray no niserana ny sofiko ilay radio fa ireo no tena nisongadina. Tsy azo visavisaina noho izany ny fandrisihana sy ny fanasana atidoha nataony nandritra ny fotoana maharitra hatramin'ny fikendrena hanesorana ireo mpivarotra tsy manara-dalàna ireo. "Izahay mpivarotra no nametraka ny Ben'ny Tanàna eo ka anjaranay mpivarotra ihany no manaisotra azy eo!" hoy ny hita sy re androany. Tsy mivoaboaka foana izany teny izany fa raha izaho manokana dia sahy milaza fa tsy nisy nifidy an'i Lalao Ravalomanana ho Ben'ny Tanàna izany ireo na ny iray aza fa ilay kandidà nilaza ny hamerina ny tsena eo Analakely no nofidiany tsy misy hambahamba.
Izany no ohatra iray ataon'ny fampitam-baovao iray eto Antananarivo sy azo renesina sy jerena any amin'ny faritra sasany amin'ny alalan'ny fantsona fahitalavitra andoavam-bola. Tsy atao mahagaga loatra noho izany raha mandeha any amin'ny tsy izy ny fisainan'ny olona omena vahana eto an-drenivohitra. Soratra natao ho vavolombelona izao soratako etoana izao.
Jentilisa 24 aogositra amin'ny 11 ora alina.